War cusub oo ka soo baxay Itoobiya oo ku saabsan biyo -xireenka Renaissance iyo biyaha wabiga Niil – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA War cusub oo ka soo baxay Itoobiya oo ku saabsan biyo -xireenka...
Talaadadii, Itoobiya waxay ballan -qaadday inay si caddaalad ah oo caddaalad ah u adeegsan doonto biyaha wabiga Niil iyadoo la tashaneysa waddamada ay quseyso.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Itoobiya Radwan Xuseen ayaa sheegay in qaraarkii qabyada ahaa ee ay Tunisia u gudbisay Golaha Ammaanka bishii July ee la soo dhaafay ee la xiriiray biyo xireenka Renaissance uu ahaa mid lagu taageerayay Masar.
Intii uu kulan la qaatay danjireyaasha waddamada Wabiga Niil, wuxuu tilmaamay in rabitaanka Tunisia ee ah inuu mar kale codsi u gudbiyo Golaha Ammaanka ay keeni karto in dalalka ay quseyso xaalad adag oo u baahan iskaashi si ay dib ugu noqoto wadadeeda.
Wuxuu intaas ku daray, “Tallaabadan oo kale oo aan faa’ido lahayn oo dal Afrikaan ah ayaa kaliya wax u dhimaysa wadaxaajoodka saddex -geesoodka ah ee Biyo -xireenka Renaissance waana inaysan aqbalin waddammada Wabiga Sare.”
waxaaney u qorney warka wasiiru dowlahu sidan
Danjire Redwaan Xuseen wuxuu la heshiiyay Danjirayaasha Dawladaha wadamada wadaaga- Wabiga Niil oo aaney ku jirin kuwey is hayaan
Wasiiru dowlaha H.E. Danjire Redwan Hussein ayaa wada hadal la yeeshay maanta (Ogosto 24) Danjirayaasha Dawladaha wadamada wadaaga Wabiga Niil ee Itoobiya.
Munaasabaddan, Wasiiru -dawluhu wuxuu ku celceliyay ballanqaadkii dheeraa ee aan kala go’a lahayn ee Itoobiya ee ahaa in si caddaalad ah oo caddaalad ah looga faa’iidaysto biyaha wabiga Niil iyadoo wadatashi dhow lala yeelanayo waddamada wabiga.
Arrintan, wuxuu u bogaadiyay waddamada dooxada ah ee saxiixay oo ansixiyay Heshiiska Qaabka Guud (CFA) wuxuuna ugu baaqay kuwa kale inay ku daydaan.
Danjireyaasha, ayaa dhankooda sheegay in loo baahan yahay iskaashi si wadajir ah loo maal-gashado kheyraadka xuduudaha iyo xallinta dhibaatooyinka Afrika iyadoo la adeegsanayo dadaallada Afrika.
Danjire Redwan ayaa sidoo kale soo xusuustay soo jeedintii Tunisia ee loo gudbiyay Golaha Amaanka si loo taageero Masar taasina ay goluhu si sax ah u diideen.
Marka la eego arrintan, kulanka ayaa lagu xusay in u diyaargarowga socda ee Tunisia si uu mar labaad ugu gudbiyo Golaha Ammaanka codsi aan habboonayn oo ay ku ridi doonto dhammaan waddamada durdurrada ah xaalad adag oo u baahan iskaashi si dib loogu noqdo.
Tallaabada noocan oo kale ah oo aan wax -tar lahayn oo ay waddo dowlad Afrikaan ah ayaa kaliya wiiqaysa wada -xaajoodkii saddex geesoodka ahaa ee GERD iyo in dawladaha sare ee webiga sare aysan marnaba aqbalin, ayuu Danjiruhu ku soo gabagabeeyay.
Previous articleQof Falastiini ah oo ku dhaawacmay iska hor imaad ay la galeen ciidamada Israa’iil xadka Gaza
Next article𝐂𝐮𝐧𝐭𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐱𝐢𝐥𝐢𝐠𝐠𝐚 𝐍𝐚𝐚𝐬-𝐍𝐮𝐮𝐣𝐢𝐧𝐭𝐚
Qof Falastiini ah oo ku dhaawacmay iska hor imaad ay la galeen ciidamada Israa’iil xadka Gaza
RW Kheyre oo ku guuleystay in uu baajiyo kulankii Baarlamaanka ee...